China 75% Alcohol Disinfectant e-IBC / Drum ifektri abakhiqizi | Zhongrong
Ngaphansi kwethonya le-covid-19, i-75% yotshwala-magciwane yotshwala iba yisidingo sethu sokuzinakekela empilweni yethu yansuku zonke ikakhulukazi kwezinye izindawo zomphakathi ezifana nesikole, isibhedlela, isitolo esikhulu, ihhotela, njll. Lo mkhiqizo uqukethe i-75% yotshwala engabulala i-coronavirus nokunye amagciwane ukuze aqaphe impilo yethu kahle kakhulu.
Ohola ubuchwepheshe be-ethanol eChina isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-20
Ngaphansi kwethonya le-covid-19, i-75% yotshwala-magciwane yotshwala iba yisidingo sethu sokuzinakekela empilweni yethu yansuku zonke ikakhulukazi kwezinye izindawo zomphakathi ezifana nesikole, isibhedlela, isitolo esikhulu, ihhotela, njll. Lo mkhiqizo uqukethe i-75% yotshwala engabulala i-coronavirus nokunye amagciwane ukuze aqaphe impilo yethu kahle kakhulu. Iphakethe leDrum / IBC linomnotho omningi, linomthamo omkhulu, futhi inani eliphansi ngokwesilinganiso kunamanye amaphakethe amancane, ungawagcwalisa kuphakethe elincane bese uwasebenzisa. Njengoba sikhiqiza utshwala obuhlaza, intengo yethu izoncintisana kakhulu futhi ibe nekhwalithi ephezulu. Ngaphandle kwalokho, sidlulile ukuqinisekiswa kwe-CE, FDA, ne-ISO. Sethule umkhiqizoI-TECH-BIO ukuyenza ibe ngu-1 brand yemikhiqizo yokubulala amagciwane eChina njengoba sinotshwala obusezingeni eliphakeme eChina. Singumholi eChina kubuchwepheshe be-ethanol. Sine cishe 500,000 square metres workshop endaweni esifundazweni Hebei, China. Inkampani yethu yasungulwa ngo-1999. Ngibheke phambili ekubeni ngumlingani wakho womhlaba wonke futhi ufeze isimo sokuwina!
I-Net Volume: 200L / 1000L
Izinzuzo: Utshwala bususelwe · Kuphephile emvelweni · Triclosan Mahhala ·
Ubheka: Ukusiza ukuqeda amabhaktheriya esikhunjeni noma ebusweni bezinto.
Ukuqondiswa: Mane ubeke izandla, isikhumba esiqinile noma ebusweni bezinto ezijwayelekile, bese usigcina imizuzu engu-1-3.
Izexwayiso: Ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela · Kuyabhebheka · Hlala kude nokushisa nelangabi kugcine lapho izingane zingafinyeleleki khona ∙ Gwema ukuthintana nobuso, amehlo nesikhumba esonakele.
Izithako Ezingasebenzi: Amanzi Ahlanzekile
Olunye Ulwazi: Kugcinwe endaweni epholile futhi eyomile evaliwe.
Ini "okuvamile” izinto zihlanzeka? Ingabe izobulala i-corona?
IMPENDULO ENGCONO KAKHULU:
Siyabonga ngombuzo omuhle! Siqonda ngokuphelele ukuthi kungani ubuza lo mbuzo. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-FDA njengamanje ayivumanga noma imiphi imishanguzo, kufaka phakathi izinto zokuhlanza izandla, ukuvimbela noma ukwelapha i-covid-19. Sithatha isibopho sethu sokuqinisekisa ukuthi abathengi baya emthonjeni ofanele walolu hlobo lolwazi, abanye ochwepheshe baseChina sebevele bafakazele ukuthi u-75% Utshwala bungangena esembozweni se-covid-19 futhi baqinise amaprotheni abo ukuze bangasebenzi.
Sawubona, wenza kanjani ukuthi ipompo lisebenze? Sisanda kuthenga ibhodlela kodwa sicabanga ukuthi ipompo kungenzeka inephutha. Ingabe ikhona indlela ekhethekile yokuwenza usebenze?
Siyabonga ngokufinyelela mayelana ne-TECH-BIO 75% Alcohol Disinfectant! Zama ukucindezela phansi kupompo ngomunwe wakho, iphampu kufanele ivele.
Singenza isigubhu esingu-200L noma i-1000L IBC njengephakethe lenqwaba le-75% Alcohol, kungaba lula kwabanye abasabalalisi bezimali ukuthi bahlukane babe ngamaphakeji amancane.
Olandelayo: 50ml 75% Utshwala Obulala Amagciwane I-TECH-BIO